février 2020 – Trinitera Malagasy
29 février 2020 Njara Pascal
Andriamanitra tsy tia ratsy fa ny olombelona no be siasia Jenezy 2, 7-9; 3, 1-7/ Salamo 50 Romana 5, 12-19 Matio 4, 1-11 Karemy : avy amin’ny teny frantsay hoe carême, izay avy amin’ny teny latinina hoe XL (quadragesima), midika hoe efapolo (40) : isa enti-milaza zavatra iray manam-petra, ary mazàna hoenti-milaza ny fotoana fiomanana….
27 février 2020 Njara Pascal
Izaia 58, 1-9a/ Salamo 50/ Md Matio 9, 14-15 Omaly dia nasaina hisafidy isika na hanaraka ny lalan’ny fiainana na hisafidy ny lalan’ny ozona sy ny fahafatesana. Safidy malalaka izany fa tsy mora kosa ny mitozo amin’ny lalana nosafidiana. Anisan’ny fitaovana atoron’ny Soratra Masina antsika mba hahafahana mizotra ny lalan’ny fiainana, amin’ny fandavan-tena isan’andro,…
26 février 2020 Njara Pascal
Deterônômy 30, 15-20/ Salamo 1/ Lioka 9, 22-25 Manomboka ny Karemy isika dia ampian’ny Litorjia mba hanitsy izay toe-tsaina mety tsy mifanaraka amin’ny maha-kristiannina antsika. Voalohany amin’izany ny fiheverana momba ny voninahitr’Andriamanitra: tsy maintsy hijaly mafy ny Zanak’olona, holavin’ny loholona sy ny lehiben’ny mpisorona mbamin’ny Mpanora-dalana ary hovonoiny. Ny fahefa-mahefa mihitsy no hioko hanohitra an’i…
24 février 2020 Njara Pascal
Tsy ankasa Siraka 2, 1-10/Salamo 36/ Ankasa Jakôba 4, 1-10/Salamo 54/ Md Marka 9, 29-36 Rehefa tsy mahita havaly ny olona na manahirana azy ny teninao dia hodiany fanina ny zavatra lazainao. Efa fanindroany izao no nilazan’i Jesoa tamin’ny Mpianatra fa hatolotra eo an-tanan’ny olona Izy, hovonoina fa hitsangan-ko velona (izany manko no Kerygme, mistery fototry…